Sady Ety no Atsy (Nofy Faha-9) | dailynews.blaogy
Tsaroako fa nandeha namangy olona tany ampigadrana teny Antanimora aho t@ izay ary niaraka t@ Liva ilay namako ary lehilahy iray izany izay tsy fantatro akory, antsoiko hoe X, fa dia namana moa izy tao anaty nofy.
Tety @ arabe ampitan ilay trano figadrana aho no nijery ary hitako fa voahodidin ny ridao mena mivolombatolalaka sy fotsy mitaratra(transparent) ilay trano. Izany hoe tsy hita ilay building fa dia ridao ihany no hita mikopakopaka ety ivelany eny ambony rihana. Tsy haiko mazava hoe solondrindrina ve ireo ridao sa dia ilay varavarankely no ngeza be. Fa toa hita taratra kely avy ety ivelany ny any anaty efitra sasany. Nony tafakatra tany ambony anefa izahay dia hita fa toa nisy ihany ny rindrina sy varavarana izay hita taratra kely ihany koa izay miloko maitso tanora.
Vao nivoha ny varavaran ilay olona izay notsidihinay dia rehako niakatra ny fofona izay azo antsoina fa tsy manitra mihitsy nivoaka avy tao amin ilay efitrano. Nihazakazaka aho noho izany nanatitra ilay coca izay nentinay ary nametraka azy teo ambony latabatra ary lasa nivoaka haingana tahaka ny tsy teo.
Tadidiko fa dia nalalaka tokoa ny efitrano ary tadidiko ihany koa fa fandriana vy miloko fotsy ny fandriany. Saingy dia maizimaizina be ilay efitrano.
Na izany aza anefa dia hoy aho t@ Liva sy X: hay ve ka samy manana efitrano malalaka be tahaka izao ny gadra e, sady amin izay mahazo misotro coca.
Nony tafavoaka ny arabe izay tahaka ny fasipasihana izany izahay dia nahita moto nitarika tomobilina izahay nandalo. Misy soratra manga ngezabe ilay tomobilina voasarika milaza hoe “prere Pedro”. Ireo olona mitaingina azy dia sady manokona totohondry no milaza hoe avoahay izy fa naman I pere Pedro. Hoy aho T@ ireo namako hoe: ahoana moa no ahafantarana fa tena naman I pere Pedro io, ary izany koa ve no antony hamoahana ny olona izay miditra ampigadrana? Hmm…
Nony avy eo anefa dia iny indray izhay telo mianadahy mmitanjozotra miakatra manaraka ilay lalana fandehananan’ny mpandeha no sady niteny hoe: fa inona anefa no nahatonga an I X niditra ampigadrana e. (hay X indray izao no nigadra an). Dia I Liva nitsasaingoka, ny hadalany ihany ka, niady aman olona tany ny antony.
Nony tafiakatra kelikely izahay hamonjy ny namanay dia hitako Liva nanala ny kapany fa tsemboka hono izy ary notazominy teny antanany izany. Malalaka ny kapany ka manjary lasa miaka midina ao anaty kappa ao hono ny tongony. Kapa misarina scoubidoo ny saron ilay izy ary fotsy sy vita @ hoditra ilay izy.
Nony tonga teo antapon ny fiakarana izahay dia indreo nisy ankizivavy sinoa maromaro sy afrikana roa, ary ny rahavaviko efa niandry anay teo. Ny sasany nipetraka teo amin ny seza teo ankavia ary ny sasany nitsangana sy nitangorona teo ankavanana. Niandry anay izy ireo fa ho ho any @ Disney World any Orlando hono.
Dia hoy aho hoe: tokony tsy nifampiandry ihany isika raha be dia be tahaka izao satria rehefa tafiditra ao tsy mainsty hilahatra ihany. Ary raha miaraka be dia be dia sahirana raha hifampiandry satria samy te handeha @ izay halehany daholo rehefa tafiditra ao fa hilaharana daholo ny kilalao rehetra.
Toa tsy nisy resaka iny zavatra nolzaiko iny fa hitako fotsiny ihany ny rahavaviko nanao veste pied de poule mainty sy fotsy ary lobaka fotsy no tao anatiny. Hoy izy t@ ireo namany manodidina hoe: I need a hug( mila fihinina aho) . Dia tsaroako fa ilay tovovavy afrikana nanao volo afro sy nanao veste volontany no namihina azy voalohany, nony avy eo dia tonga koa ny sasany ary tahaka ireny olona avy nahafaty baolina ireny ny fijery azy ka tonga samy namihina azy daholo ireo namany avy etsy aloha sy avy any aoriana ary eo ankavia sy ankavanana.
Tao aorian io dia tsaroako fa teny anaty ireny trano avo be tahaka an I Hilton ireny indray aho. Rihana faha enina teo angamba satria nazava be tamiko ny zavatra nitranga teny ambany anefa ihany koa tsaroako fa ambony ihany ny toerana nisy ahy nijery avy eo amin ilay rindrimpitaratra be.
Nikija tokoa ny orana t@ izay ry ilay renirano sa ilay ranomasina teo ambany dia nanonja tokoa fa nandrivotra ihany ny andro.
Nisy fianakaviana vitsivitsy izay tsy nanantrano tetsy ambany. Trano lay vita amin ny lamba soga no tranon izy ireo. Ary niisa efatra teo angamba ireo trano lay tetsy ambany. Fotsy hoditra daholo izy ireo( vazaha izany).
Nandrivotra marina tokoa ny andro koa nisidina niala t@ ilay lay ny tafo soga ary nanvatsava ny rivotra ka tonga teo amin ny rindrimpitaratra be teo alohako.
Indreo ireo fianakaviana teo ambany nihanjaka ny fiananan’izy mianakavy tao anaty lay keliny. Tadidiko fa telo mianaka izy ireo tao amin ilay trano lay voalohany. RAD sy zanaka ary vavy ny zanany. Ny nanaitra ahy kely dia tsy mba nanao akanjo mandry izy ireo fa akanjo fitena andavanandro no nanaovany teny ampandriana. Rangahy teo @ faha enipolo taona maheriny no tadidiko. Nanao akanjo ba mavo izy ary col V ilay akanjo ba. Lobaka fotsy ny tao anatiny ary beige ny pataloha nanaovany. Ilay vadiny kosa dia zipo karokaro maitso ihany no tadidiko.
Ireo fianakaviana ireo dia nampiantranoinay nony avy eo. Nony tafiakatra tato an’efitra izy ireo dia nanintsana ny ranon orana sy ny hamandoan ny akanjo teny ankodiny.
Izaho sy ilay sakako moa izay mankafy matory ery no sady miraondraona fa safosafoiko ny lohany dia mbola teo ambaravarankely ihany nijery nandinika ny tany ivelany izay toa nangina tanteraka.
(Martsa 8 hifoha Martsa 9/2007)
Ankapobeny | Manaraka | Mialoha | Verindrohy (trackback) (0)